Redmi K20 ga-abịa na 586 MP Sony IMX48 sensor | MP XNUMX Gam akporosis
Ndị ọrụ gọọmentị Redmi Weibo gosipụtara na ọkwa mbụ ya, nke ga-abụ Redmi K20, ga-abịa na ya Sony 586 MP Sony IMX48 sensọ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe mmetụta dị n'ọtụtụ ekwentị na etiti dị elu nke ewepụtara n'afọ a, akụkụ ndị dị ka oghere oghere, ihe nhazi ihe oyiyi, na ihe ngwanrọ ndị ọzọ bụ ihe dị iche na ibe ha., Na K20 agaghị ahụ ya site na ngalaba foto ya.
Ngwaọrụ ahụ ga-enwe ntọala kamera atọ, ma ọ bụ naanị isi ihe ngosipụta ekpughere ka ekpughere. Anyị nwere olile anya na ekwentị nwekwara igwefoto dị obosara yana telephoto ma ọ bụ ihe omimi dị omimi dị ka igwefoto nke atọ.
Na mgbakwunye na ịkwado igwefoto bụ isi, Redmi CEO Lu Weibing kpughere na ọkwa ọzọ na ekwentị ga-akwado 960fps nwayọ ngagharị ndekọ. Nke a bụ atụmatụ na Anyị bụ 9, ya mere ọ dị mma ịmara na ọ ga - adịkwa na flagship Redmi dị ọnụ ala karịa. Agbanyeghị, ihe anyị nwere olile anya n'ezie, ma ọ bụ ihe anyị na-achọsi ike, n'ezie, na Redmi K20 Pro nwere bụ ihe nlere anya nyocha anya nke Mi 9 juru.
Nyaahụ, Redmi K20 kwadoro ịnwe igwefoto selfie. Enweela ike ịbịa na nhazi Snapdragon 855. Anyị nwere mmetụta ọzọ teaser ga-abụ maka mkpọ.
Banyere nkọwa ndị ọzọ, enweela okwu nke ihuenyo nwere akụkụ 19.5: 9, nke ga-abụ nnukwu nha, ọ bụ ezie na ọ ga-ejide ya n'akụkụ abụọ na elu na ala dị warara. Ihe ọ bụla ọ bụ, ngwaọrụ ọzọ ga - eju gị anya na njirimara ya niile, mana karịa ihe ọ bụla maka ọnụahịa ya, nke ka ga - ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » The 586 MP Sony IMX48 ga-abụ protagonist nke azụ foto modul nke Redmi K20